Valiny: Ataovy mandeha ho azy ny fifandraisan'ny mpivarotra aminao amin'ny fikarohana sy ny fandrosoana mailaka LinkedIn | Martech Zone
Valiny: Ataovy mandeha ho azy ny fifandraisan'ny varotrao amin'ny fikarohana sy ny fanatontosana mailaka LinkedIn
Alakamisy 5, 2020 Alakamisy 5, 2020 Douglas Karr
Tsy misy olona hiady hevitra amin'izany LinkedIn no sehatra tambajotra sosialy miorina amin'ny asa fandraharahana feno indrindra eto an-tany. Raha ny marina dia mbola tsy nijery resume natambatra ho an'ny mpifaninana aho ary tsy nanavao ny tohiko manokana tao anatin'ny folo taona taorian'ny nampiasako ny LinkedIn. Ny LinkedIn dia tsy mamela ahy hahita izay rehetra ataon'ny resa fotsiny, fa afaka mikaroka ihany koa ny tambajotran'ny kandidà ary mahita hoe iza no niarahan'izy ireo niasa sy avy - avy eo hifandraisa amin'ireo olona ireo raha te hahalala bebe kokoa.
Mazava ho azy fa tsy loharanom-pahalalana ho an'ny mpilatsaka hofidina na ny mpifanaraka… fa ny angon-drakitra feno indrindra eto an-tany ihany koa ho an'ireo mpiara-miombon'antoka amin'ny harena ankibon'ny tany sy ny vinavinany, indrindra raha manaparitaka Marketing amin'ny kaonty tetika.
Mamaly ny fifampiraharahana amin'ny varotra
navalin'i dia multichannel sehatra fifampiraharahana varotra izay mandeha ho azy ny fanatontosana mailaka manokana, antso, ary lahasa, raha ny Sales kosa afaka mifantoka amin'izay tena zava-dehibe - ny fifampiraharahana. Ity misy horonantsary topy maso tsara:
Anisan'izany ny valiny
navalin'i ahafahanao mahita prospect kalitao amin'ny fampielezan-kevitra amin'ny LinkedIn fanentanana avy amin'ny Salesforce, Hubspot, Copper CRM, ary koa mpamatsy angona am-polony amin'ny alàlan'ny fampidirana zanatany sy serivisy antoko fahatelo.
LinkedIn Chrome Extension - Jereo ny mailaka fandraharahana ataon'ny mpanentana ao amin'ny LinkedIn ary ampitomboy ny vokatrao amin'ny Reply Chrome Extension. Ny asanao isan'andro sy ny fahaizanao mifandray amin'ny alàlan'ny LinkedIn, mailaka ary feo dia mora foana.
Sequencing amin'ny varotra multichannel - Mifarimboa amin'ireo vinavinanao amin'ny alàlan'ny fantsona maro - mandefasa mailaka anao manokana sy fanaraha-maso, miantso, manatanteraka asa isan'andro, mifandray ary mankanesa any amin'ny LinkedIn ho anao.
Famokarana varotra - Atsaharo ny vokatrao miaraka amin'ny lahasa isan'andro sy ny fahaizana mifandray amin'ny alàlan'ny LinkedIn, mailaka, feo ary fiaraha-monina. Hetsika fidirana ary ampifandraiso amin'ny tananao ny CRM, Zapier, na amin'ny alàlan'ny fampidirana API.
Sales Management Management - Tantano amin'ny fomba mora ny mpanjifa ho avy - zarao ny vinavinanao arakaraka ny mason-tsivana marobe mba hitazomana ny fitorianao. Manafatra na manampy fifandraisana, fifandraisana an-tsokosoko, sivana fifandraisana, avereno jerena ny tantarany sy ny asany, ary koa ny lisitra mainty ho an'ireo domains sy ireo fifandraisana.
Sales Cloud Calls - Mifandraisa amin'ny vinavinanao amin'ny telefaona avy eo amin'ny kaonty Reply sy ny extension Chrome. Ampidiro ny fifandraisana amin'ny varotrao amin'ny Cloud Calls.
Smart Sales Features - Ny fiasa tohanan'ny AI an'ny Leverage Reply mba hifaneraserana tsaratsara kokoa sy haingana kokoa - anisan'izany ny fanasokajiana mailaka inbox, ny kalitao ary ny tolo-kevitra, ny tolokevitra naroso ary ny fiantsoana antso ho an'ny vinavinan'afo.
Ekipa Sales Edition - Miaraha miasa amin'ny fampielezan-kevitra sy ny vinavina, mitantana mpikambana ao amin'ny ekipa, mizara maodely mailaka sy fampielezan-kevitra, manara-maso ny fahombiazan'ny ekipa ary bebe kokoa amin'ny Fanontana ekipa valiny.
Tatitra momba ny varotra sy Analytics - Araho ny fandrosoana ataonao ary diniho ny valin'ny ekipanao miaraka amin'ny tatitra feno antsipirihany nataon'i Reply momba ny filaharana, valin'ny ekipa, firaketana an-tariby ary antso an-tariby miaraka amin'ny fahafaha-manondrana.
Fitaovana fanatsarana ny valiny - Ampifanaraho amin'ny hafatrao ny hafatrao mba hahatratrarana tampon'isa tampoka - Ny valiny dia manana fitaovam-panatsarana hanampiana anao hahazo valiny tsara kokoa, ao anatin'izany ny kalitaon'ny mailaka, ny fitsapana A / B, ny maodely fandefasana ary ny fandaharam-potoana fandefasana boaty.
Mahazoa valiny Demo
Fampahalalana: a navalin'i rohy mpiara-miasa ato amin'ity lahatsoratra ity.
Tags: miantso fanentananamazavacontactcloudcrm varahinadatanyzefikarohana amin'ny mailakafanamarinana mailakaFifandraisana fenohubspotLinkedInfidirana an-tseraseramadkudumarketing varotravarotra ivelanytomponanavalin'ifitantanana fifandraisana amin'ny varotrafifampiraharahana amin'ny varotrasehatra fifampiraharahana varotravarotra varotratatitra momba ny varotrasalesforcezapierzoominfo
Loharano famolavolana logo: Torohevitra, fisintomana, infografika ary fomba fanao tsara indrindra
Maninona no zava-dehibe ny fikendrena ny fifandanjan-kevitra ho an'ireo mpivarotra hitety ny ho avy tsy misy cookie